“UMDLWENGULI WASE-TEMBISA” UTHWESWE ICALA LOKUDLWENGULA ABESIFAZANE ABANGAMA-33 | Scrolla Izindaba
“UMDLWENGULI WASE-TEMBISA” UTHWESWE ICALA LOKUDLWENGULA ABESIFAZANE ABANGAMA-33
UGift Mkhwanazi, oneminyaka engama-33, wase-Tembisa, uthweswe icala lokudlwengula nokuthumba abesifazane abangama-33 esigamekweni sobugebengu obunesihluku esathatha iminyaka eyisithupha.
Phakathi kowezi-2013 nowezi-2019, izakhamizi zaselokishini lase-Kurhuleni zithe bezihlalele ovalweni njengoba amahemuhemu asabalala ngomuntu ophakathi nendawo ogqoke ibhulukwe le-jean elidabukile, egqoke imaski futhi ephethe isibhamu.
Izinsolo ezibhekiswe kuMkhwanazi zisazohlolwa enkantolo. Uma elahlwa yicala, uzoba ngomunye wabadlwenguli abadume kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika.
Ngokwamaphepha asenkantolo atholwe ngabakwa-Scrolla.Africa, ukuhlasela kwakhe kokuqala okwaziwayo kwenzeka ebusuku ngomhla zingama-22 kuZibandlela kowezi-2013.
Isisulu, owesifazane osemncane (“CM”), sasigoduka sinqamula endaweni yase-Ivory Park ngesikhathi ummangalelwa emubamba eqhamuka ngemuva.
Kuthiwa uqale ngokumklinya, wamvimbela ukuthi angamemezi, ngaphambi kokuthi amphoqe ukuba amunike umakhalekhukhwini. Ube esemhudulela endaweni engahlali muntu futhi wamdlwengula ngodlame.
Njengoba iminyaka yayiqhubeka, ukuzethemba kwakhe kwakhula.
NgoNhlaba kowezi-2018, kusolwa ukuthi waya kwabesifazane abane ababehamba e-Ivory Park.
Ngemuva kokudubula isibhamu sakhe emoyeni, wabaholela bonke epaki elingenalutho, lapho aqhubeka khona wabadlwengula ngonya bobane ngaphambi kokuthatha omakhalekhukhwini babo.
Lokhu kulandelana kwezigameko emibili kuzokwakha iphethini okusolwa ukuthi umenzi wobubi uzophinda kaningi kwezinye izikhathi ezingama-20. Esewonke, amacala obugebengu ayi-149.
Isikhathi ngasinye amaphepha asenkantolo athi:
● Ubecinga izisulu zakhe e-Ivory Park, e-Ebony Park noma ezindaweni zase-Kaalfontein.
● Uma sezitholakele, ubezisabisa ngommese noma ngesibhamu.
● Izikhathini eziningana umenzi wobubi wayegwaza noma adubule izisulu zakhe ngaphambi kokuzithatha aye nabo endaweni ecezile eseduze.
● Lapha, wayezohlasela ngokocansi isisulu ngasinye.
● Ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokwehluleka, wayephetha isigameko ngasinye ngokweba ifoni yesisulu.
Yile mininingwane yokugcina eholele ekubanjweni kukaMkhwanazi.
Amaphoyisa akwazile ukulandela umkhondo kamakhalekhukhwini ayewuntshontshile, esitatimendeni esichaze kabanzi okuholele ekulandeleni nasekuboshweni komsolwa ngomhla ziyi-11 kuZibandlela kowezi-2019.
Kodwa-ke, izisulu zalesi sidlova esinobudlova zingase zibe nomuzwa wokuthi izindaba ezinhle zokubanjwa kwakhe zafika sekwedlule iminyaka eyisithupha.